बाँदरले सिंगो बस्ति नै लखेटेपछि - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
बाँदरले सिंगो बस्ति नै लखेटेपछि
काठमाडौं । बाँदरको आतंक पछि दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका बोचस्थित बाह्रकुच्चेमा २५ परिवार विस्थापित भएका छन् । भूकम्पले घर भत्किए पछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका स्थानीय बाँदरको आतंकपछि बस्ती छाडेर अन्यत्र जान बाध्य भएका हुन् । असुरक्षित टहराभित्र पस्दै बाँदरले आक्रमण गरेर घाइते बनाउन थालेपछि बाह्रकुच्चेका २५ घर परिवारले बस्ती नै छाडेको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष नकुल केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्पपछि भौगोलिक जोखिममा परेको बस्तीमा बाँदरले अचाक्ली दु:ख दिन थालेकाले भीमेश्वर नगरको वडा नं. ८ स्थित बोचको पुरानो ३ नम्बर वडामा पर्ने बाह्रकुप्चेका बासिन्दा ४ नम्बर वडामा सरेका छन् ।
स्थानीय शिक्षक धनबहादुर तामाङका अनुसार बाँदरले जताततै दु:ख दिइरहेको भए पनि बाह्रकुच्चेका बासिन्दालाई भने बस्ती नै छाडेर हिँड्न बाध्य बनायो । बाँदरकै कारण बोच पुरानो वडा ३ स्थित मानेटोलका ३० घरधुरी र उर्लिनीका २० घरधुरीलाई पनि त्यतिकै हैरानी दिएको उनले बताए । ‘उनीहरुले बस्ती नछाडे पनि बाली लगाउन भने छाडेका छन्,’ धनबहादुरले बताए । अहिले उक्त बस्ती पुरै खाली छ, खेतबारी बाँझो छ । खेतीपाती लगायपछि बाँदरले दुख दिने स्थानीयको गुनासो छ । बाँदरको आंकका कारण उनीहरु जिविकोपार्जनका लागि बनीबुतो गर्ने, श्रम ज्यालामा निर्भर हुने र वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको स्थानीय बताउँछन् ।
बाँदरबाट लेखेटिएता पनि बृद्धबृद्धा भने बाह्रकुच्चेस्थित थातथलो मै आएर दिन कटाउँछन् । दैनिक एक घण्टाको बाटो हिँडेर आउँछन् र डिलको धाराबाट बाँदरको रजाई हेरेर फर्कन्छन् । ‘जन्मे खेलेको ठाँउ चटक्कै कसरी बिर्सन सकिन्छ र, ‘७१ वर्ष लागेका यमबहादुर बस्नेतले भने, ‘बाह्रकुच्चेमा आएर दिन बिताउने गरेका छौ ।’ उनीहरुको भनाईमा एक घण्टा माथिको बस्ती फुयाँल गाउँ नजीकै गएर बसेपछि घनाबस्तीका कारण बाँदरको डर छैन् । बाह्रकोचेमा भूकम्पले भत्काएका घरहरुको भग्नावशेष छ । चित्राका अस्थायी टहराहरु बाँदर छिरेर भत्काएका, चित्राहरु च्यातेका दृष्यहरु देख्न सकिन्छ । ‘यी ढेडुहरुले केही गरी खाना दिएन, ‘७० वर्षीय कमल बहादुर बस्नेतले भने, ‘सबै खेतीपाती बाँदरकै भोजनका लागि गरिदिएको जस्तो भएपछि बस्ती नै बाँदरको जिम्मा लगाएर हिँड्यौँ ।’ भूकम्पपछि बाँदर अक्रमक बनेको मात्रै हैन संख्या पनि बढेको शिक्षक धनबहादुर तामाङको अनुमान छ । धान, कोदो, मकै गहुँलाई पहिला पनि असर गथ्र्यो ।
अहिले त अलैँची र किविलाई समेत असर गर्न थालेपछि किसानहरु बाँदरबाट झन पीडित भएका हुन् । धनबहादुरका अनुसार घाँसलाई समेत बाँदरले माडेर बिगारिदिन्छ । माडिएको घाँस बाँदर गन्हाएर गाई वस्तुले समेत खाँदो रहेनछ । बाँदरले हैरान गर्न थालेपछि सुरुसुरुमा लखेट्ने, खोरमा हाल्ने जस्ता कार्य स्थानीयले सुरु गरे । त्यसबाट पनि नियन्त्रण हुन नसकेपछि चार रोपनी जग्गा किनेर अन्यत्र सरेको कमल बस्नेत दु:खेसो गर्छन ।
स्थानीय भीम बहादुर एक वर्ष अघि बाँदरले घरेर आक्रमण गरेपछि हतारहतार थातथलो छाडेको बताउँछन् । ‘घरमा पस्ने, भाँडाकुडा फाल्ने, लुगा च्यतिदिने गरेपछि नभागेर के गर्नु,’ उनले भने । बोचमा लेकबाट झरेको र बेशीमा हुने रातो कालो दुबै थरी बाँदर छन् । करीब एक हजारको संख्याको बाँदरहरुले छिमेकी गाँउहरुमा पनि दु:ख दिँदै आएका छन् । वडाअध्यक्ष नकुलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाँदर नियन्त्रण गर्न निवेदन गरेको बताउनुभयो । मा
र्ने र यातना दिने कार्य नगरीकन नियन्त्रण गर्नु भन्ने जवाफ आएपछि के गर्ने भन्नेबारे छलफल भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाभरी नै बाँदरको समस्या भएपछि गएको चुनावहरुमा मतदाताले बाँदर नियन्त्रण गरिदिन मागपत्र पेश गरेका थिए । उम्मेदवारहरुले नियन्त्रण प्रयास गर्ने भनेर वाचा पनि दिएका थिए । आफूले पनि त्यस्तो वाचा गरेको तर नियन्त्रणका उपाय निकाल्न नसकेको वडाअध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । हाललाई बाह्रकुच्चेका विस्थापितहरुलाई घडेरी उपलब्ध गराइदिन सहयोग कार्यक्रम ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । कान्तिपुरबाट